Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo: Soomaali Wey Midowday | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo: Soomaali Wey Midowday
LONDON – Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay khudbad u jeediyey qurba joogta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London ee dalka Ingiriiska ,khudbadiisa ayuu uga hadlay arrimo dhowr ah.
Madaxweyne Farmaajo iyo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ayaa si isku mid ah ula hadlay shacabka ,iyagoona uga warbixiyey xaalada dalka uu ku sugan yahay.
Waxa uu sheegay in ay mideysan yihiin guud ahaan shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay iska tuureen qabiil iyo wax lamid ah ,wuxuu kaloo sheegay in ay ka shaqeyn doonaan midnimada iyo dowlad wanaagga.
Waxaan rabaa inaan inaan halkaan idiin kaga caddeeyo in Soomaali ay midowday, shacabkeeda midoobeen, qabiil iyo qurunkiisa waan tuurnay, annaga waxaan qaadaneynaa howl, annaga howshaan qabaneyno waxay tahay inaan ka shaqeynno midnimo, micnaheedu waxay tahay dowlad qurxoon, dowlad wanaagsan, horumar iyo umad Soomaaliyeed oo walaalo ah” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay garab siiyaan dowladooda oo haddii ay qaldan tahayna ay iyagu saxaan.
Ugu dambeyn Madaxweynaha ayaa kula dardaarmay Soomaalida UK in ay ilaaliyaan sharciga dalka ay joogaan maadaama uu magangalyo siiyey.